ပထမအကြိမ် MICC Forum တွင် ပြောကြားသော သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်း
ယနေ့ကျင်းပတဲ့ "နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်"သို့ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဒုတိယသမ္မတနှင့်တကွ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့များနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်တော်များ ခင်ဗျား မင်္ဂလာပါလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် အားလုံးစုံညီစွာ တက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အဆွေတော်တို့ အားလုံးသိရှိကြတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ပထမအဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာမှာ နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို သိသာထင်ရှားစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို တွေ့ရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဒုတိယအဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာကို နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဘ၀ တိုးတက်ရေးအတွက် အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကာလတို ၅ နှစ် စီမံကိန်းများဖြင့် ကာလရှည် ၂၀၁၁ မှ ၂၀၃၁ ခုနှစ်အထိ နှစ် ၂၀ လွှမ်းခြုံတဲ့ အမျိုးသားဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (National Comprehensive Development Plan-NCDP)ကို ရေးဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာနဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေကိုလည်း အဆွေတော်တို့အား ချပြတိုင်ပင် ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အခြေခံမူဘောင် (Framework on Economic and Social Reform)အရ ပြည်သူ့ဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးမှု (People Centered Development)နည်းလမ်းနဲ့ ချဉ်းကပ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်စနစ်၊ ငွေကြေးကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ဖြေလျှော့မှုများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အစိုးရစနစ်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက်စနစ် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ထိရောက်၊ ထက်မြက်သည့် အစိုးရစနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေး အစီအစဉ်များအဖြစ် ဦးစားပေးနယ်ပယ် (၁၀)ရပ် ပါဝင်ပါကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
ယခုအခါ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တတိယအဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဘ၀ တိုးတက်ရေးအတွက် မိမိတို့ အစိုးရအနေနဲ့ ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Good Governance)နှင့် သန့်ရှင်းသောအစိုးရ (Clean Government)ဖြစ်ပေါ်စေရေးတို့ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ပြုပြင်တည်ဆောက်လာခဲ့တာ ၁ နှစ် ၉ လ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လတာ ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့ မူဝါဒများဟာ ဘက်စုံအရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက် ဆောင်ရွက်လာမှုတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာက အကူအညီအထောက်အပံ့ ပေးလိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း အစီအမံများကို ဦးစားပေးကဏ္ဍ(Priority Sector)နှင့် ဦးစားပေးနယ်မြေ (Priority Area)တို့ကို သိရှိလိုကြတဲ့အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဖိုရမ်ကို ကျင်းပဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများအနေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး ခေတ်မီစက်မှုနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအကြား အချိုးကျမျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ရရှိခံစားနိုင်မည့် လူမှုစီးပွားနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများ မှန်ကန်ရေးနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ ပြင်ဆင်ရေး စတဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကို ချမှတ်ထားပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ပဲရစ်ကြေညာစာတမ်းအရ အကူအညီ အထောက်အပံ့များ ထိရောက်အကျိုးရှိရေးအတွက် ချမှတ်ထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု (Ownership)၊ ညီညွတ်မှု (Alignment)၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု (Harmonisation)၊ရလဒ်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်မှု (Managing For Result)၊ အပြန်အလှန်တာဝန်ယူမှု (Mutual Accountability)စတဲ့ အခြေခံမူ ၅ ရပ်နဲ့အညီ မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီတွေ ထိထိရောက်ရောက်ရှိဖို့ ကိစ္စဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အကူအညီအထောက်အပံ့၊ ချေးငွေများကို လက်ခံရယူတဲ့အခါ အိမ်ရှင်နိုင်ငံက အဓိကမောင်းနှင်သူ နေရာယူပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ထောင်စုနှစ်ပန်းတိုင်များ (Millennium Development Goals-MDGs)ကဲ့သို့သော ပန်းတိုင်နှင့်ရည်မှန်းချက်များလည်း ပြည့်မီစေနိုင်သလို အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးအပ်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့စေတနာအရ ထိရောက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် မိမိတို့နိုင်ငံမှာ အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဖြစ်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ယန္တရားတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ပြီး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation-M&E)ကိုလည်း သေချာစွာ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များမှ မိမိတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံချက်များနဲ့ စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပုံမှန်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အကူအညီများ ပိုမိုထိရောက်စေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရာတွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှာ ပိုမိုထိရောက်ရေးအတွက် ခိုင်မာသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွင် ထိရောက်မှုရှိစေမည့် နေပြည်တော် သဘောတူညီချက်ကို အတည်ပြုထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထိရောက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုရာမှာ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့များ၊ အတိုးမဲ့ချေးငွေ၊ အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ချေးငွေ၊ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သောရလဒ်နဲ့ ပြယုဂ်ကြောင့် အကူအညီများ ပိုမိုစီးဝင်စေခြင်း၊ အလှူရှင်များ၏ စိတ်ဆန္ဒ စေတနာ ပိုရှိစေခြင်း၊ ထိရောက်တဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေနဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်စေခြင်း၊ လူနေမှုဘ၀ အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်း၊ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု (Human Development) ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်ကို များစွာ အထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့အစိုးရဟာ ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ ပြည်သူရဲ့ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ People centered government ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် အိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အသေးစား ပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေး (Micro Credit) လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ ကျေးလက်သမ၀ါယမ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျေးလက်လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးလက်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အိမ်တွင်းစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးစတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ၀င်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးအတွက် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်သူများ တိုက်ရိုက်ခံစားရရှိစေသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိခံစားနိုင်ရေး၊ ပညာရေးတိုးတက်မှုရှိရေး၊ လူမှုဘ၀ဖူလုံရေး၊ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ရေး၊ ဆက်သွယ်မှုစနစ် ကောင်းမွန်ရေးများကိုလည်း တစ်ပါတည်း အလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာကဏ္ဍ သက်သက်တစ်ရပ်သာမကဘဲ စက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ မိမိနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်များ တင်ပို့နိုင်ရေးကိုလည်း အထူးစီမံကိန်းများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအကူအညီများ ရရှိပါက မိမိတို့၏ ရည်မှန်းချက်များ ပိုမိုပေါက်မြောက် အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး (Peace and Stability) နဲ့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (Socio-economic Development) ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီဆိုသလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှလည်း တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Unity and diversity ဆိုတဲ့ သဘောတရားအတိုင်း သဘောထားတူညီတာတွေ ရှိသလို မတူညီတာတွေရှိတာကိုလည်း လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတာတွေကို တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မတူညီတာတွေကို စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး တဖြည်းဖြည်း တူညီသည်အထိ ညှိနှိုင်းရယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ကြားစေ့တဲ့ အနေအထားမျိုးရောက်လာအောင် မိမိတို့ လက်တွေ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဒီလူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းဟာ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်၊ သာမန်မခိုင်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်မှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရသူတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ လူမှုစီးပွားအခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး၊ အဆိုပါဒေသများမှာ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးတို့အတွက် အလွန်အရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဗဟိုဌာန (Peace Development Centre) ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ (Peace Development Fund) မှာ ပါဝင်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူရှင်နိုင်ငံများအားလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောကြားလိုပါတယ်။
အလျဉ်းသင့်လို့ KIO အဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို ပြောပြလိုပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသည်အထိ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ KIO မှလွဲပြီး ကျန်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး Political Dialogue ကိစ္စရပ်များကို ယခု ၂၀၀၃ နှစ်ဦးပိုင်းမှာ စပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ KIO ကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့ ဆက်လက်ကမ်းလှမ်းထားပြီး ယခုလည်း ဒီနေရာကနေ ထပ်မံ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ မကြာမီ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်ကမ်းလာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တပ်မတော်က အကန့်အသတ်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စစ်ရေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းဖို့ အမိန့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အလားတူ ရပ်ဆိုင်းပေးသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သန်းခေါင်စာရင်းကို ကောက်ယူရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ နှစ် ၃၀ ခန့်ကြာမှ သန်းခေါင်စာရင်းကို ထပ်မံကောက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် လိုအပ်မယ့် အကူအညီအထောက်အပံ့တွေကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ဒီဖိုရမ်ဟာ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး ကျင်းပဆောင်ရွက်တဲ့ ဖိုရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့များနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် ဧည့်သည်တော်များ အားလုံး မအားလပ်တဲ့ကြားက စုံညီစွာ တက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ယခု ဖိုရမ်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာနဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများကို ချပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်သလို ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ အနေဖြင့်လည်း တတ်စွမ်းသမျှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးပေးပါရန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှနိုင်ဖို့ သီးခြားဆွေးနွေးမယ့် Session တွေမှာလည်း ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
အာဏာလိုချင်လို့ သမ္မတရာထူး ရယူခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
Time မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါး
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ ကျုံကူးရွာ လေးက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စည်းချက်တွေဟာ ရာစုနှစ် နောက်တစ်ခုဆီကနေ ပဲ့တင် ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ နွားတွေ ကျွဲတွေဟာ စပါးစိုက်လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ ကျက်စားလို့၊ ထမီတိုတိုဝတ်ထားကြတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတွေ ဟာ ဆေးတံတွေခဲလို့၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ခြင်တွေကို မောင်း ထုတ်လို့နေရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်း ရှည်စစ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ဟာ တောတောင်ထဲမှာ စိုးမိုး ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေဟာ သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကို စွန့်လွှတ် ခဲ့ပါပြီ။ နေဝင်ချိန်နောက်ပိုင်းမှာ ဆင်ရိုင်းကြီးတွေ သွား လာနေကြပြီး မကြာခဏဆိုသလို ဒေါတကြီး ရန်မူ တတ်ကြတာကို ရွာသူရွာသားတွေ တွေ့ကြုံရပါတယ်။
အသက်(၆၇)နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် မွေး ဖွား ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ကျုံကူးရွာကလေးက သစ်သား အိမ်ကလေး တည်ရှိနေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ဖျာတွေယက်ပြီး သင်္ဘော ဆိပ်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး သုံးပုံတစ်ပုံ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေလိုပဲ သမ္မတ မိသားစုဟာ ဆင်းရဲကြပါတယ်။ ကော လိပ်ကျောင်း တွေ တက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ ဝေလာဝေးပါပဲ။
ဒါပေမယ့်လည်း ဦးသိန်းစိန်ဟာ စစ်ဆေးမှုတွေ အောင်မြင်ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ စစ်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော စစ်မှုထမ်းအဖြစ် ၄၅ နှစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နံပတ်(၄)စစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှ အငြိမ်းစားယူချိန်မှာ စစ်ဘက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု အဆုံးသတ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒီနောက်တော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ အရပ်သားသမ္မတအဖြစ် အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလို့ သိရှိလာကြတဲ့ အထီးကျန်နိုင်ငံ ဘားမားဆိုတဲ့နိုင်ငံဟာ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး အကြား ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဇာတိသားကလေး ဟာ ဒီအပြောင်းအလဲကို ဦးဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျုံကူးရွာကလေးဟာ သမ္မတကြီးနေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် အသစ် နေပြည်တော်ကနေ တစ်ကမ္ဘာ လောက်ခြားနေပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်သိရှိလာခဲ့ကြတဲ့ နေပြည်တော်ဟာ လက်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ စိတ် ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပြီးတော့ ရှစ်လမ်းသွားလမ်းမကြီးတွေ၊ အဆောက်အဦသစ်ကြီးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
သမ္မတအိမ်တော်ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗာဆိုင်းနန်းတော်က ပိသုကာလက်ရာတွေကို ပုံစံယူတည် ဆောက်ထားတာမျိုး ဖြစ်ပေမယ့် (အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးဂျာစီမြောက်ပိုင်းအကြောင်း ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးထားသော The Real Housewives of New Jersey ဟု တင်စားထားပါသည်) အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုပုံစံမျိုး ရောထွေးပါဝင်နေ တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲသုံးဦး သက်တောင့်သက်သာ ထိုင်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတဲ့ ရွှေရောင် (ဆက်တီ) ထိုင်ခုံကြီးမှာ ထိုင်နေတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ဝန်ကြီးတွေ၊ တက်ရောက်သူတွေ ပြည့်နေတဲ့ ခန်းမကြီးနဲ့ စောင့်ကြိုနေတဲ့ အကြီးအကဲမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ကြည့်ရတာ နေ့လည်စာစားပြီးစ နူးညံ့ အေး ဆေးပြီး တည်ငြိမ်လှတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ တစ်ခြားကိစ္စအကြောင်းအရာတွေ မပြောခင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဒီလိုမျိုး သမ္မတ ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ အိပ်မက် မမက်ခဲ့ဘူးလို့ ဝန်ခံရမှာပါ လို့ ကျွန်မကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “သမ္မတ လုပ်ဖို့ အရည်အချင်းမီတဲ့ တစ်ခြားလူတွေ ရှိနေပါတယ်” ၊ သမ္မတကြီးက လည်ချောင်းဟန့်ပြီး ပြောပါတယ်။ သမ္မတကြီးဟာ အမိန့်နာခံတတ်သူလို့သာ လူသိများတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
သေးသွယ်တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ ပုခုံးထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သန်း(၆၀) နီးပါး လူဦးရေရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့ အခြားသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်တွေအတွက် စံနမူနာယူစ ရာမော်ဒယ်တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ ကမ္ဘာကြီးက မျှော်လင့်ထား ကြပါတယ်။
ပေါက်ကွဲတော်လှန်အုံကြွခဲ့တဲ့ အာရပ်နွေဦးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှု ဟာ အဆများစွာ ပိုမိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အတွက် အားလုံးကို ပိုပြီး အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်လောက် က မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရက အာဏာရှင်စစ်ခန်းတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အထ် ကမ္ဘာ့အမည်ဆိုးစာရင်းဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်အဖြစ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာအောင် အစပြု လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာက အဲဒီစစ်အစိုးရထဲက အဖွဲ့ဝင်တွေပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
အခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဟာ လမ်းမတွေပေါ်မှာ အမျက် ဒေါသတွေနဲ့ ထုတ်ဖော်မှုတွေက မဟုတ်ဘဲ အာဏာပိုင်တွေ ဆီက ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ “ကျွန်တော်တို့ဟာ စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကနေ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဗဟိုဦးစီးစီးပွားရေးစနစ် ကနေ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်သစ များပြားလှတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ အလယ်မှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်” လို့ သမ္မတကြီးက တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို ပြောပါတယ်။ ဒီလို ရွှေ့ပြောင်းမှုတစ်ခုတစ်ခုဆီကို ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး အချိန်ယူရလေ့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဒီအကူးအပြောင်း သုံးမျိုးစလုံးကို တစ်ချိန်တည်း ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။
ရာစုနှစ်တစ်ဝက်နီးပါး တပ်မတော်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးကို ဂျုံးဂျုံးကျစေခဲ့ ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတော့ ကလေးသူငယ် တွေကို အဓမ္မခိုင်းစေခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံ ဆန္ဒပြသူတွေကို သေနတ်ပြောင်းတွေ လှည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သိပ်မကြာလှသေးတဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေ တစ်ဒါဇင်ကျော် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။)
လူသိနည်းလှတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက စစ်မှန်ပြီးစည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး အဆင့် တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးက မယုံ ကြည်ခဲ့ပါဘူး။
ခန့်မှန်းထားခဲ့သလိုပါဘဲ မဲရေတွက်မှုတွေမှာ လိမ်ညာမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ ပါတီဟာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားသော စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေထဲက ပိုပြီးတင်းမာတယ်လို့ ထင်ရတဲ့သူတွေကို ကျော်လွန်ပြီး ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဦးသန်းရွှေရဲ့ ညာလက်ရုံးသဖွယ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်အဖြစ် ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးက ရှုမြင်ထားတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘဝတစ်ခုကို အထင်အရှား ရယူခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင်ပုံစံ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးသဘောတရားနဲ့ အနောက်အုပ်စုပုံစံ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသဘောတရား(၂)ခုအကြားမှာ နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတိုက်ပွဲမှာ မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်ကို ရယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်အုပ်စုကမှ မကျေမနပ် မေးခွန်းထုတ်တာမျိုးတွေ မရှိခဲ့ ပါဘူး။
“ကျွန်တော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမငတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးရပ်တည်ချက်တွေ ပိုမိုပြီး ခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီ မရှိဘဲ မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မှာမဟုတ် ဘူး လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ထားပါတယ်။” လို့ သမ္မတကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ပြောတဲ့အခါမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို ထပ်ခါတလဲလဲ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးတဲ့ကာလမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှား သူတွေဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေ၊ လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်တွေလိုမျိုး အခြေခံ အခွင့်အရေး တွေ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခွင့်တွေ ရရှိခံစားလာခဲ့ပါပြီ။
သြဂုတ်လအတွင်းမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ကက်ဘိ နက်ထဲက သဘောထားတင်းမာသူတွေကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလမှာတော့ တစ်ချိန်က အမေရိကန်ကျူးကျော် ဝင်ရောက်မှာကို စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ကြောက်ရောဂါရ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ သမ္မတအိုဘားမား အလာကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနီးပါးနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် တွေ ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်း ထောင်ချီပြီး အကျဉ်းထောင်တွေက ပြန်လွတ်လာခဲ့ကြပါပြီ။ စာနယ်ဇင်းဆင်ဆာလုပ်တာတွေ အကုန်လုံး မရှိသလောက်အထိ ဖြစ်နေပါပြီ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှား ဆုံးနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ် တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၉၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့် စစ်အစိုး ရက လျစ်လျူရှုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ NLD ပါတီက ပါတီဝင် ၄၂ ဦးနဲ့အတူ လွှတ်တော်အမတ်တွေအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါ တယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းအထိ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဟာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်အဖြစ်နဲ့ပဲ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော် မှာလည်း ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက တောင်းဆိုခဲ့ကြတာကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေက ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမည်ကို ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်း မပြုဖို့လည်း ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသန်းရွှေက တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
သမ္မတအသစ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ညစာတည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ ပါတယ်။ Lady အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိရှိထား ကြ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် တည်တံ့လျက် ရှိနေချိန်မှာ အံ့သြစရာ ဖြစ်စေခဲ့ တာတော့ ဆန္ဒမပါဘဲ သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကတော့ အပြီးမသတ်သေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ စစ်ဘက်ကျောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့သူတွေ အခိုင်အမာနေရာ ရရှိစေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးသိန်းစိန်ထက် ပိုမိုပြီး လူထုချစ်ခင်မှုရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရအောင် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသွားဖွယ် ရှိနေပေမယ့်လည်း မြန် မာနိုင်ငံသားအတော်များများကတော့ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ ဘဝတွေမှာ ရှိနေဆဲပါ။ အကျင့်ပျက်မှုတွေက ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေပြီး နိုဝင် ဘာလအတွင်းက လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှုဖြစ်တဲ့ ကြေးနီသတ္တုတွင်းတစ်ခုကို ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်း ကြီးတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုးရေးတင်းမာမှုတွေ ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး မြောက်ပိုင်းရှိ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ အနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ ရာနဲ့ချီပြီး သေဆုံးနေရ ပါတယ်။ ဒီပြဿနာ(၂)ရပ်စလုံးအပေါ် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရဲ့ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ အနည်းငယ်တော့ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတအနေနဲ့ အစောပိုင်းမှာ အပစ် အခတ်ရပ်စဲဖို့ ကမ်းလှမ်းထား ခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ကချင်သောင်းကျန်း သူတွေကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး စစ်တပ်ဟာ သမ္မတရဲ့ အမိန့်ကို လိုက်နာနိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိအပေါ် စိုးရိမ် စရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ လူပေါင်း တစ်သိန်းကျော် ရောက် ရှိစေခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအကြောင်း မေးမြန်းချိန် တစ်ခုမှာပဲ သမ္မတကြီးဟာ စိတ်မရှည်ဟန် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်မေးခွန်း ဆိုပြီး သမ္မတကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး စမ်းသပ်မှုကတော့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ မျှော်မှန်းထားကြတဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ချီးကျူးအမွှမ်းတင်ထားပေမယ့် တစ်ကယ်လို့သာ NLD ပါတီဟာ စစ်ဘက်ကျော ထောက်နောက်ခံပါတီကို အနိုင်ယူခဲ့မယ် ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာမှာလဲ။
အစိုးရဟာ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်ဦးမှာလား။
ပိုပြီး စိုးရိမ်ဖို့ကောင်းတာကတော့ မကျေနပ်တဲ့ ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ယူနီးဖောင်ဝတ်တွေကို ပထမဆုံး အကြိမ် အာဏာရယူစေခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကလို နောက်ထပ် အာ ဏာသိမ်းမှုတစ်ခု လုပ်လာနိုင်မလား ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလို)
အငြိမ်းစားယူပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်း မခံရစေဖို့အတွက် ယခု အသက်(၈၀)ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ သဘောတူညီချက် တစ်ခု ကောင်းကောင်း ရှိထားဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း အခွင့်အာဏာ ယုတ်လျော့သွားခဲ့ရတဲ့အပေါ် အခြားသော စစ်ဘက်အရာရှိတွေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ခံစားနေ ကြရတယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
“လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေအနေ နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုစိတ် ပြင်းပြလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးပေးရမှာပါ” လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက် လာခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မင်းဇော်ဦးက ပြောပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဒါကို လက်ခံထားပါတယ်။
“ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရေးကြီးတဲ့ အလှည့်အပြောင်း ကာလ ရောက်ရှိနေပြီ ဆိုတာကို သိရှိထားတဲ့အတွက် သမ္မတတာဝန်ကို ကျွန်တော် လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ အာဏာလိုချင်လို့ သမ္မတရာထူး ရယူခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံက ပြည်သူတွေအတွက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဘဝကို ဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့ သမ္မတရာထူး ရယူခဲ့တာပါ။” လို့ သမ္မတကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ဟာ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထဲက အာဏာရှင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်သီးတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး ရင်ဘတ်မှာဆုတံဆိပ်တွေချိတ်ဆွဲလို့ စစ်ယူနီဖောင်းမှာ ဖဲကြိုးတွေချိတ်ဆွဲလို့ ဆိုတာမျိုး ထင်မြင်ရပါတယ်။
အမေရိကန်သံတမန်တွေက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ သစ္စာရှိလူယုံတော် အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် သာ ပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ “သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး အပြောင်းအလဲတွေ ဆောင်ရွက်မယ် လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ထင်ထားမယ် မထင်ဘူး။ တစ်ကယ်ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပ်ကို အံ့သြခဲ့ကြရပါ တယ်” လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဦးလှမောင်ရွှေ က ပြောပါတယ်။
စစ်အစိုးရ နံပတ်(၄)ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဘာတွေက ထင်ရှားလာစေခဲ့ပါသလဲ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ သစ္စာရှိ စစ်သည်တော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ အမိန့်နာခံဖို့ လေ့ကျင်ပေးခဲ့ပေ မယ့်လည်း အာဏာ လက်ဝယ်ရရှိလာခဲ့ရခြင်းက သူရဲ့စိတ်ဓါတ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ အပြစ်ဆိုစရာနည်းပါးမှုကြောင့် လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခြားစစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မတူတာက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ဒါမှမဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ဘယ်တုန်းကမှ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်ဘူးခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတာတွေကလည်း သမ္မတကြီးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ဟာ အသက်(၄၀) အရွယ် မှာ ပြည်ပနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ အခြားသော ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေနဲ့ မတူညီတာက အနည်းဆုံးတော့ ဦးသိန်းစိန် ဟာ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ထိတွေ့မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တစ်ချိန်က ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အများဆုံး ဆန်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဟာ အာရှရဲ့ထွန်းသစ်လာတဲ့စီးပွားရေးတွေနောက်မှာ များစွာ နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ပြီး လူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အခါ အန္တရာယ်များလှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေ ကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။ မြန် မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာ ပြည်ပက ပေးကမ်းလှူဒါန်းတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင် ငံရေးသဘော တရားရေးရာအရ လွှမ်းမိုးမှုတွေ လျော့ပါးစေဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ ပြည်ပအကူအညီတွေကို လက်မခံခဲ့ကြ ပါဘူး။
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ပြီး တစ်ပတ်အကြာ ရွာတွေဆီကို လှေနဲ့ ဝင်သွားတဲ့အခါမှာ ပျက်စီးနေတဲ့ စပါးခင်း တွေကြားမှာ၊ သီးနှံတွေ ပျက်ပြီး ရေဝင်နေတဲ့ လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ အသက်ရှင်သန်နေသူတွေ တည်ရှိနေကြပါတယ်။
ဒီသဘာဝဘေးကျရောက်တဲ့နယ်မြေဒေသကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ကတော့ ဦးသိန်းစိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သမ္မတကြီးဟာ ကြီးစွာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားပါလိမ့်မယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီ သွားရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကို ကူညီမှ ဖြစ်မယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ တယ် လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အစိုးရအကြံပေး ဦးနေဝင်းမောင်က ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ဟာ ဒီအတွက် နာမည်ကောင်း မယူခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အပြောင်း အလဲကြီးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ” လို့ ဦးနေဝင်းမောင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်အာဏာရှင်မှ အပြင်ပန်းက ထင်မြင်နေကြသလို သူတစ်ဘက်သားကို ဒုက္ခပေးလိုတဲ့ ကျောက်သား ကျောက်စိုင်ကြီးတွေ မဟုတ်ကြပါ။ ဒါ့အပြင် စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အစိုးရထဲမှာ အာဏာရှင်အကြီးအကဲ တစ်ယောက်ရဲ့အမိန့်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစိတ်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်လက်ထက် ရောက်ရှိသွားတာနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ လျင်လျင်မြန်မြန် သိသိသာသာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
စစ်သည်အင်အား လေးသိန်းရှိတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ အထီးကျန်နိုင်ငံမှာ နေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောကြား နိုင်တဲ့ သူတွေုအပြည့်ရှိနေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကို သင့်တင့်လျောက် ပတ်စွာ ပြောကြားနိုင်တဲ့ သမ္မတကြီးဟာ အိုဘားမား၊ ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျားနဲ့ တိုနီဘလဲတို့လို အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေကို ဖတ် ရှုကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ တစ်ချိန်တုန်းက ကမ္ဘာ့အဖိနှိပ်ဆုံး အစိုးရသတင်းစာဖြစ် ခဲ့တဲ့ New Light of Myanmar သတင်းစာ အယ်ဒီတာနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဘက်အရာရှိဟောင်းဖြစ်တဲ့ သန်းမြင့်ထွန်းက သူတို့ သတင်းစာက လေလှိုင်းထဲက လူသတ်သမားလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပသတင်းအစီရင်ခံချက်တွေကို နားထောင်ခဲ့ ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အမှောင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ဘယ်သူနေချင်ပါ့မလဲ” လို့ ၄င်းက မေးခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့လည်း ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင် ဖြစ်ချင်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
Now that international sanctions have been lifted on Burma, Western businessmen are flocking to the world’s newest economic frontier. The dramatic political climate change is due to reforms that emanated from within the military regime that once ruled the country; and chief among the reformers is President Thein Sein, Burma’s own Gorbachev, down to his gray pallor and balding pate—and the subject ofaTIME profile this week, available to subscribers here. While Russia has faltered on its path toward democracy, Burma, which is officially known as Myanmar, hasachance to forgeadifferent route.
He has been startlingly conciliatory to the opposition once hounded mercilessly by the military regime—including the charismatic Aung San Suu Kyi. InaSeptember speech to the U.N. General Assembly in New York City, Thein Sein acknowledged the “authoritarian” nature of the junta he once belonged to and congratulated Suu Kyi “for the honors she has received in this country in recognition of her efforts for democracy.”
The once formidable regime began to transform afteracataclysmic cyclone in 2008 pummeled the country. Burmese who criticized the government’s response were handed lengthy jail terms. A further manmade crisis was averted when aid, both domestic and foreign, began reaching farflung villages. But, in the generals’ lair, Naypyidaw—a multi-billion-dollar fortress against regime change—even Burma’s rulers felt the landscape was shifting. Now in his 80s, Than Shwe, the head of the junta, was surely concerned about his legacy. Previous junta leaders had been purged upon retirement. “The Senior General didn’t want to spend his last years under house arrest,” says an aide to Thein Sein. “He trusted Thein Sein to keep his promise to let him disappear gracefully.” Thein Sein told TIME that he and his former boss “do not speak regularly.”
(BEHIND THE STORY: TIME’s Hannah Beech on Burma’s President Thein Sein)
If Burma wants true international approval, it will have to tackle the broken economy as well as the gap between what new laws promise and what they so far have delivered. Foreign investment in Burma actually declined in the first nine months of 2012 compared to the same period in 2011. Regime cronies are feasting on the nation’s natural resources, grabbing land and sweetheart contracts. The scale of graft is epidemic. In November, thugs broke upaBuddhist monk-led protest overacopper mine linked toaChinese arms manufacturer,acommon terror tactic during the junta’s days. (The government later apologized for the crackdown in which protesters were burned and beaten.)
Perhaps the most important—and certainly the most existential—challenge is the ethnic friction that could cleaveanation with little binding it together other than lines drawn on colonial maps. Decades of fighting and tribal mistrust have left more thanamillion people in Burma displaced or stateless.
The generals who wrested control of Burma from its civilian rulers in 1962 didn’t bother much with justifying their rule. But any shred of legitimacy the army regime possessed came from its purported ability to halt the centrifugal forces ripping apart this diverse nation. Cobbled together by the colonial British, Burma isapatchwork land of 135 officially recognized ethnic groups (the Rohingya are not officially recognized as such, compounding the problems in Arakan). Since coming to power, Thein Sein’s government has signed ceasefires with 10 major ethnic militias, who were fighting for autonomy. Only one ethnic insurgent group, the Kachin Independence Army, remains at war. Since June 2011, fighting in Kachin areas, which border China, has claimed hundreds of lives and displaced some 100,000 people, most of whom have received no international aid. In recent days, the Burmese military has escalated hostilities by launching airstrikes on the Kachin.
Thein Sein says that further reforms are key to defusing Burma’s ethnic tinderbox. “It is only withawholly democratic government that we can make peace sustainable,” he says. Aung Min,aformer major-general who is nowaminister dealing with ethnic affairs, talks about power-sharing arrangements to ensure that minorities, many of whom live in areas rich with natural resources, feel they are not being exploited. “The President is willing to try many things,” he says. “He knows that the military should be the last resort to fixaconflict.”